Ngaba Utyala imali kwizinto zokuKhuthaza? | Martech Zone
Ngaba Utyala imali kwizinto zokuKhuthaza?
NgoLwesine, Septemba 20, 2012 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Kwimpelaveki ephelileyo bendimenywe liqela e Amaqhinga eSiza ukuba phezu kwabo Umda womboniso werediyo yeWebhu kunye nokuthetha nabanye babafundi abatsha boNxibelelwano lweMithombo yeendaba abavela e-IU Kokomo bezokuthetha nathi. Yayingumnyhadala omnandi kwaye abafundi babenomdla kwaye babuza imibuzo ngetoni-hayi malunga nemithombo yeendaba emitsha kodwa malunga neshishini liphela. Kwakukhuthaza ngokumangalisayo ukubona indlela ababenomdla ngayo.
Xa ndisiya kwezi ziganeko, ndihlala ndizama ukuzisa uhlobo oluthile lwezinto zokwazisa. Ngeli xesha ndizise i4Gb iidrive drive ezithi DK New Media yenziwe ngu iPromos.
Iidrive zentengiso ze-USB zabetha kwangoko kwaye emva kokuba abafundi abambalwa bezibonile, bendinesihlwele sabafundi abandingqongileyo. Abantu bathanda izinto zokwazisa… ngakumbi xa ziluncedo. Njengalo naluphi na urhwebo, kukho imali elungileyo echithwe kunye nemali embi echithwe, nangona kunjalo. Ukuqhuba kwe-USB akubizi kangako, ngakumbi xa zine-4Gb :). Nangona kunjalo, ngokunika into exabisekileyo yokwazisa, ibonelela ngengqondo yomgangatho kunye nokwahlula esingathanda ukuba abantu banxibelelane nenkampani yethu.
Sukukroba kwizinto zentengiso. Inokuba ngumqondiso kumathemba akho okuba uyiloluhlobo lomthengisi oluza kubakhangela!
Malunga ne-ePromos: Ndiphinde ndayalela ukusuka iPromos Amaxesha ambalwa ngoku kwaye uyixabisile inkonzo yabo kunye neminikelo yabo. Iidrive zashicilelwa kakuhle, ziboniswa ngexesha kwaye zafakwa kakuhle, kwaye babenezaphulelo zomyalelo omkhulu kakhulu. Enye into endiyithandayo nge-ePromos kukuba bathumela ii-imeyile zethu "Ixesha loku-odola kwakhona" malunga nenyanga emva koku-odola into ngesaphulelo soku-odola kwakhona. Sisikhumbuzo esihle sokujonga ukubonelelwa kwakho kwezinto zentengiso kunye noku-odola kwakhona xa kukho imfuneko!
tags: epromosIzinto zokwazisa umsithoUkukhuthazwaizinto zokwazisaschwagukuqhuba kwe-usb
Ukufundwa kwe-e ngokunyuka
Kutheni le nto iWalmart kufuneka ibheyile kwiNtlalo yeHyperlocal
Jan 24, 2014 kwi-2: 09 AM
Izipho ezixhasiweyo ziya kwakha umhlaba owahlukileyo ngokuthengisa njengoko abathengi begcina ixesha lakho elongezelelekileyo kunokuba bazilahle okanye bangazihoyi njengezinye iintengiso.